चर्चित नृत्यङ्गना रानाको हविगत यस्तो भयो ! भक्कानो फुट्ने एक वास्तविक दर्दनाक जीवन (फोटोकथा) « Today Khabar
चर्चित नृत्यङ्गना रानाको हविगत यस्तो भयो ! भक्कानो फुट्ने एक वास्तविक दर्दनाक जीवन (फोटोकथा)
प्रकाशित ४ असार २०७४, आईतवार १७:४५
काठमाडौ । समाचारको फिचरमा देखिएका दुवै तस्वीर चर्चित नृत्यङ्गना लक्ष्मी राना मगरका हुन् । स्वस्थ्य शरीरहुँदा धेरै चलचित्र, गीत तथा स्टेजमा नृत्य देखाईन् । नृत्यका पारखीहरुले उनको नृत्यबाट धेरै मज्जा लुटे । तर आज उनी दुबै मृगौला फेल भएपछि बेसाहारा जीवन जिउन बाध्य छिन् । केही देष्य हेर्नुहोस् । एउटा दृष्य अहिले उनी उपचार गराईरहेको बीर अस्पतालको शैयाबाट लिइएको हो । अरु झरिलो यौवन देखिने बेला नृत्य गर्दै गर्दा लिइएको हो । धेरै समय भएको छैन । पाँच बर्षको अन्तरालमा नै त्यस्तो चोला अहिले यस्तो भएको छ ।
उमेर धेरै नकाटेपछि अविबाहित रहेकी रानाको उपचारमा साथ सहयोग गर्ने मात्र हैन छेउमा बसेर हेरविचार गरिदिने कोही छैनन् । आमाबाबुको शेखपछि दाई भाई दिदि बहीनी भएपनि उनीहरुपनि उपचार गर्दा गर्दै आजित छन् । त्यसैले उनी अहिले बेसाहारा बनेकी छन् । उनलाई केही समय अघि दिपशिखा फाउण्डेशनल आश्रय दिएको थियो भने केहीपहिला देखि नेपाल मगर सांस्कृर्तीक संघको पहलमा नेपाल मगर संघ केन्द्रको कलङ्की स्थित भवनमा आश्रय लिइरहेकी थिइन् । हाल उनी बीर अस्पतालमा उपचाररत छन् । समाजसेवी जुनु पुनले उनको उपचारका लागि सहयोग जुटाइरहेको लक्ष्मीले बताएकी छन् ।
विगत १० वर्षदेखी दुबै मृगौलाले काम नगरेपछी उपचाररत पिडित कलाकार लक्ष्मी घरबार र सहारा विहिन भएको थाहा पाएपछी मगर संघले आश्रय दिएको थियो । एक्लो जीवन बनेको लक्ष्मीलाई उपचार मात्र हैन खाना दिने या हेरचाहा गर्ने समेत कोही छैन । उनलाई हरेक क्षण हेरचाहा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कुनै समय कम्प्युटर जस्तै नाच्न सक्ने उपमा पाएकी र चर्चित कलाकार लक्ष्मी रानाले वाचा बिर्सेको छैन, निमित्त नायक, एक साँझ’ लगायत अनेकौं टेलिश्रृङ्खलाम आफ्नो अभिनयले सबैको मन छुन सफल हुनुहुन्थ्यो तर नायिका राना रोगले पिडित बनेपछी उपचारमा सबै रकम सक्काएर अहिले अरुको सरणमा पर्नु परेको छ ।
उहाँ यसअघी कालोपुलस्थित एक घरको सानो कोठामा भाडामा बस्दै आउनुभएको थियो तर उपचारले रित्तिएकी लक्ष्मीले भाडा तिर्न नसके पछी सो कोठा छोड्नुप¥यो । कुनै समय स्वावलम्वी जिवन जिउने लक्ष्मीलाई रोगले थला त पारेको छ नै अहिले अरुको सहयोग र सहारामा बाँच्न झन त्यत्तिकै पिडाडायी भएको छ । त्यसैले पनी होला उहाँ जो कोही संग त्यती बोल्न रुचाउनु हुन्न तर भनिन्छ नि मर्न भन्दा बहुलाउन वेश मानिसको स्वभाव नै हो बाँचुन्जेल सम्म आशा हुन्छ । उहाँ पनी यही आशामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई अब मृर्गौला परिवर्तनको लागी रकमको खाँचो त छ नै बाँच्नको लागी विहान वेलुकाको खाना , औषधी तथा आवश्यक सामग्रीहरुको लागी सहयोगको आवश्यकता छ ।
औद्योगिक नगरी वीरगन्जमा उतिबेलाको चर्चित क्लब पञ्चम क्लबसँग सम्बद्ध भएर कला यात्रा सुरु गरेकी रानाले राजधानी पुगेर आफ्नो सो यात्रालाई उचाइमा पुराउनुभयो । उहाँले भारतलगायत जापान, स्वीजरल्यान्ड, स्पेन आदि देशमा आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नुभएको छ । रानाले ती देशमा कला प्रस्तुत गरेर कमाएको सबै पैसा आठ वर्षको उपचारमा सकिएको छ । उहाँका अनुसार सानै छँदा बाबु–आमाको मृत्यु भइसकेकोले अविवाहित लक्ष्मीसँग स्याहार गर्ने पनि कोही छैन । अहिले सम्म व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा केही सहयोग आए पनी त्यो प्र¥याप्त नभएको भन्दै विहान वेलुकाको खाना औषधि र सो औषधि पचाउन खानुपर्ने पौस्टिक पदार्थको लागी खर्च बढ्ने भन्दै उहाँले सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
आर्थिक अभावका कारण उपचार हुन नसकेर धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको हामी सुन्छौ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहयोगले कतीको ज्यान बचाउन सकिएको छ । तर मानिसको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने हक हुँदा हुँदै पनी आर्थिक अभाव र सहारा नभएका कारण कत्तीले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने कत्तीले सडकमा नारकिय जिवन विताउन बाध्य छन् । जसको गतिलो उदाहरण लक्ष्मी राना बन्नुभएको छ । उँहा संग कला जोस जाँगर हुँदा हुँदै पनी रोगकै कारण उपचारको लागी संघर्ष या त भनौँ सबैसंग याचना गरिरहनुभएको छ ।
उहाँको पहिलेका फोटोहरु हेर्दा अहिले उहाँलाई चिन्न सकिँदैन । एउटी होनाहार कलाकारले आज औषधोपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाप्रति सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरुले उपचारको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट लाखौँ रकम पाईरहेका वेला कसैको यस्तो दयनिय अवस्थामा कसरी स्वास्थ्यमा सबैको समान पंहुच हुन्छ रु मौलिक हक अन्तरगत हरेक नागरिकले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यमा समान पँहुच हुनुपर्ने भनिएपनी व्यवहारमा लागु नहुँदा धेरैले यस्तो नियती भोग्नु परेको छ । सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । साभारः जनबोली